Fanitsiana Lalampanorenana: Tsy maintsy amin'ny alalan'ny Fitsapan-kevi-bahoaka
Maro ny ady hevitra momba ny firafitry ny Andrim-panjakana sy ny andraikitra isan'ambaratonga, izay ny Lalampanorenana avokoa no mamaritra izany.
Ny Fokontany, ny lehiben'ny faritra izay mety ho soloina Ragôva, ny fanafohanana Loholona.
Rehefa miova ihany koa anefa ny andraikitra sy ny fifandraisan'ny Andrimpan-jakana amin'ny andraikitry ny Filoham-pirenena dia miova izany ny Repoblika, dia miova arak'izany ihany koa ny andraikitry ny Filoha sy ny fifandraisany, na ny fifandanjan'ny fahefany amin'ireo Andrim-panjakana hafa, dia niova izany ny mandat, na ny asa sy andraikitra nifanarahany tamin'ny vahoaka Malagasy nifidy azy.
Tsy maintsy miverina mihera amin'ny mpifidy azy indray izany ny Filoham-pirenena manontany ny mpifidy nanome fahefana azy satria niova ny andraikiny, niova ny iraka na mission ho ataony, fa tsy miankina fotsiny amin'ny vina napetrany.
Ka tsy maintsy averina indray ny fifidianana Filoham-pirenena sy ireo Andrim-panjakana rehetra mandrafitra ny Fanjakana.
Ny antsoina hoe mandat, dia ny fepotoana hiasana, ny andraikitra ankinina aminy, ny fifandraisany sy fifandajany amin'ny Andrim-panjakana hafa, ary ny vinam-piaraha-monina arosony.
Ka raha misy iray amin'ireo no miova, dia rava ny fifanekena na contrat nifanaovana tamin'ny mpifidy. Satria ny mandat dia mamaritra ny andraikitra apetraka amin'ny Filoha, na ilay olom-boafidy, amin'ny fotoana voafaritra mazava, ny vina apetrany, ny fifandraisany sy ny fahefany mihoatra amin'ireo olom-boafidy hafa, na ireo rafipan-jakana mandrafitra ny Fanjakana.
Tsy maintsy manitsy Lalampanorenana raha hikasika izany.
Mety ho azo atao any anaty "disposition transitoire indray izay, hoe ny Filoha am-perinasa dia mandray ny asan'ilay filoha vaovao, voafaritry ny Lalampanorenana vaovao", fa dia Tip Top hatrany izay.
Indrindra fa raha élection constitutionnelle no atao, izany hoe hisy Lalampanorenana 2 na 3 no hisafidianana. Mazava be fa raha resy izany ilay volavola Lalampanorenana naroson'ny mpitondra ankehitriny, dia tsy misy resaka fa dia miverina ny fifidianana Filoham-pirenena.
NY AMIN'NY FANITSIANA NY LALÀMPANORENANA
"Andininy 161.- Tsy misy fanitsiana azo atao amin’ny lalampanorenana na dia iray aza raha tsy hita fa tena ilaina
Andininy 162.- Raha toa ka hita fa tena ilaina ny fanitsiana dia anjaran’ny Filohan'ny Repoblika no manapaka eo amin'ny Filankevitry ny Minisitra, na ny Antenimiera amin'ny alalan’ny latsabato misaraka izay nolanian'ny roa ampahatelon'ny mpikambana no manao izany.
Ny volavola na tolokevitra fanitsiana dia tsy maintsy ankatoavin’ny telo ampahaefatry ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona.
Ny volavola na tolokevitra izay nankatoavina dia aroso amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka"